यामगाता प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु - Best of Japan
यस पृष्ठमा, म जापानको तोहोकु क्षेत्रको दक्षिणपश्चिमी भागमा अवस्थित यामगाता प्रान्तको परिचय दिनेछु। यहाँ धेरै पर्वतहरू छन्। र जाडोमा, धेरै हिउँ पर्दछ। माथिल्लो तस्विर माटो हो। जाओको जाडो परिदृश्य। कृपया हेर्नुहोस्! रूखहरू हिउँमा बेर्छन् र हिउँ राक्षसहरूमा परिणत हुन्छन्!
Yamagata को रूपरेखा
यमदेरा (रिशाकुजी मन्दिर)
जाओ ओन्सेन स्की रिसोर्ट र हिउँ मोन्स्टर, यामागाता, जापान = शटरस्टक_१11784053381०XNUMX१
Yamagata को नक्शा
यामगाता प्रान्त क्षेत्र तोहोकु क्षेत्रको दक्षिणपश्चिमी भागको पश्चिमी भागमा जापानको समुद्री किनारको क्षेत्र हो।
यस प्रान्तको कुल क्षेत्र को बारे मा 85% हिमाली क्षेत्र हो। पहाडबाट बग्ने पानी मोगामी नदीमा भेला भयो र जापानको समुद्रमा खन्याइयो। यामगाता प्रान्तका धेरै व्यक्तिहरू यस खोलामा बस्छन्।
यामगाता प्रान्तमा धेरै हिउँ छन्। यदि तपाईं जाडोमा यामगाता प्रान्तमा जानुहुन्छ भने, तपाईं एक अद्भुत हिउँको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। उही समयमा, तपाईले मानिसहरुलाई पनि स्कूपहरु लगायतका छतमा हिउँ फाल्न संघर्ष गरिरहनु भएको देख्नुहुनेछ।
यामगाता प्रान्त पहाडहरू द्वारा धेरै क्षेत्रमा विभाजित गरिएको छ। ती मध्ये, यदि तपाईं यामगाता शहरमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं विमानबाट यमगाता एयरपोर्ट जानुहुन्छ। यो लगभग by 35 मिनेट जति लाग्छ यमगाता एयरपोर्टबाट JR Yamagata स्टेशन सम्म।
यामगाता एयरपोर्टमा, निर्धारित एयरपोर्टहरू निम्न एयरपोर्टहरूसँग सञ्चालन भइरहेको छ।
यदि तपाईं जापान सागर छेउमा साकाटा शहर वा त्सरुओका शहर जानुहुन्छ भने तपाईंले शोनाइ एयरपोर्ट प्रयोग गर्नु पर्छ। शोनाइ एयरपोर्टमा, नियमित उडानहरू हाल टोकियोको हनेडा एयरपोर्टसँग सञ्चालन भइरहेको छ।
Yamagata Shinkansen (बुलेट ट्रेन) यमगाता प्रान्तमा चल्छ। यो फुकुशिमा स्टेशनबाट निम्न स्टेशनहरूमा रोकिन्छ। यो लगभग २ घण्टा245 मिनेट टोक्यो स्टेशनबाट यमगाता स्टेशन सम्म छ।
Kaminoyama Onsen स्टेशन
सकुरानबो हिगासाइन स्टेशन
जाडो ओन्सेन, यामागाता, जापानको र्योकानमा जाडोमा हिउँको साथ हिउँको साथ धुवाँ आउटडोर ओन्सेन (तातो स्प्रिंग) = जापान = शटरस्टक
के तपाईंलाई जाओको "जुहियो" थाहा छ?
याओगाता र मियागी प्रान्तको प्रिफेक्चुरल सीमामा जाओ पहाडहरू हुन्। यी हिमाली क्षेत्रहरूमा रूखहरू सेतो राक्षसहरू जस्तो देखिन्छ जुन माथिको चित्रमा देखाइएको छ। यी हिउँ राक्षसहरुलाई "जुहियो" भनिन्छ। यो विश्वव्यापि अनौंठो छ कि जुहायो यस्तो देखिन्छ।
ज्युयोयो तब हुन्छ जब चिसो, कडा नम हावा चल्दछ, सदाबहार ज forest्गलमा "अओमोरी तोडोमात्सु" र हिउँ यसमा खस्छ। जाओ मा, Juhyo प्रत्येक वर्ष जनवरी देखि फेब्रुअरी मा बढ्छ। मौसम स्थिर छ जब मार्च को शुरुमा Jyuhyo सबैभन्दा सुन्दर हुन्छ। मार्चको मध्य पछि, Juhyo पातलो हुनेछ।
जाओ ओन्सेन स्की रिसोर्ट सिफारिस गरिन्छ
यदि तपाईं जुहायो हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यमगाता शहर, यामागाता प्रान्तको जाओ ओन्सेन स्की रिसोर्टमा जान सक्नुहुन्छ। यमगाता र मियागी प्रान्तहरूमा दुबै जाओको पहाडहरूमा थुप्रै स्की रिसोर्टहरू छन्। ती मध्ये, झाओ ओन्सेन स्की रिसोर्ट सबैभन्दा ठूलो हो। यो जेआर यामगाता स्टेशनबाट यस स्की रिसोर्टको लागि बसबाट करीव minutes० मिनेटमा छ। यो यमगाता एयरपोर्टबाट एक घण्टाको दूरीमा छ। यो सेन्डाई स्टेशनबाट एक घण्टा 40० मिनेटमा छ।
जाओ ओन्सेन स्की रिसोर्टमा त्यहाँ दुईवटा रोपवे छन्। तपाईं यी रोपवे लिन सक्नुहुन्छ र स्की रिसोर्टको शिखरमा जान सक्नुहुन्छ (उचाई १,1,661१ मीटर)। यदि तपाईं स्की नगरे पनि, तपाईं रोपवेहरूमा सवारी गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं पहाडको टुप्पोमा जानुहुन्छ, माथि फोटो जस्तै जूह्योको संसार फैलदैछ।
जाओका पर्वतहरू ज्वालामुखीहरू छन्। त्यसैले त तातो स्प्रि .हरू बाहिर आउँदछन्। तपाईं झासे ओन्सेन स्की रिसोर्टमा ओन्सेन (तातो स्प्रि )हरू) रमाउन सक्नुहुन्छ।
यो स्की रिसोर्ट डिसेम्बरको सुरू देखि मेको सुरूसम्म खुल्ला हुन्छ। अन्य सीजनहरू, तपाईं पैदल यात्राको मजा लिन सक्नुहुनेछ।
>> झाओ ओन्सेन स्की रिसोर्टको विवरणहरूको लागि, कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
जापानको सुन्दर शरद valleyतु उपत्यका माथि उडान भइरहेको प्राकृतिक दृश्य केबल एयरको दृश्य, ओन्सेन र यामागाटा, जापानमा स्कीइ forको लागि लोकप्रिय रिसोर्टः शटरस्टक
यामागाता मियागी जापान मा माटो जाओ = शटरस्टक
शरद seasonतुमा यमदेरा मन्दिर, यामगाता, जापान = शटरस्टक
यमडेरा, यामागाता, तोहोकु, जापान = शटरस्टकमा रिसाकु-जी बौद्ध मन्दिरको ऐतिहासिक काठ वास्तुकला मध्ये एक गोडाईडो हल दृष्टिकोणबाट हिउँदको पहाडलाई हेरेर पर्यटकहरूले दृश्यको आनन्द लिन्छन्।
यमदेरा (आधिकारिक नाम रिशाकुजी मन्दिर हो) एक मन्दिर हो जुन यमदेरा स्टेशनदेखि minutes मिनेट जति JR सेन्जान लाइनमा जेआर यामागाता स्टेशन र सेन्दै स्टेशन जोड्दछ। यो लगभग १ minutes मिनेट एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा यमगाता स्टेशनबाट यमदेरा स्टेशनसम्म पुग्छ।
यमदेरा त्यो ठाउँ हो जहाँ प्रख्यात हाइकू कवि बाशो मत्सु (१ 1644-१1694 1689)) ले आफ्नो प्रसिद्ध हाइकु "१XNUMX -XNUMX १- silence silence मा चुपचाप ढु c्गामा हिर्काउने / सिकाडाको आवाजमा डुब्ने" लेखेका थिए। जापानमा बाशो र यो हाइकु दुबै प्रख्यात छन्। छ धेरै व्यक्तिहरू यस मन्दिरको भ्रमण गर्छन् जसको चुपचाप बाशोले महसुस गरे।
वास्तवमा यमदेरा एकदमै अद्भुत मन्दिर हो।
860० मा निर्मित, यस मन्दिरमा लामो ढु .्गा सीढी छ। योसँग १०११ चरणहरू छन्। यो भनिन्छ कि यस ढु stone्गामा गएर हृदयमा चिन्ता हराउने छ।
यमदेराको सबैभन्दा लोकप्रिय भवन गोदाईदो हो जहाँबाट तपाईं वरपरका पहाडहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यस बाहेक, त्यहाँ अचम्म काठको भवनहरू छन् जस्तै निमोन गेट, Okunoin र अन्य।
यमदेरा वरपरका क्षेत्रहरु धेरै प्रकृतिमा धनी छन्। कृपया तपाईको मनलाई यस तरीकाले पुरानो मन्दिरको साथ हर हालतमा ताजा गर्नुहोस्।
>> पहाड मन्दिरको विवरणको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
यमगाता प्रिन्फेक्चर = शटरस्टकमा जिन्जान ओन्सेन
जीन्जान ओन्सेन, जो एनएचकेको नाटक "ओशिन" (१ 1983 84-XNUMX) को सेटिंग थियो, जापानमा ध्यान आकर्षण गरेको छ र अब सुन्दर हिउँ पर्ने परिदृश्य भएको तातो वसन्त शहरको रूपमा विदेशी पर्यटकहरूको लागि लोकप्रिय पर्यटन स्थल हो।
यो क्षेत्र ईदो अवधिमा खानीको चाँदीमा फस्टायो। "जिन्जान" भनेको जापानीमा चाँदीको पहाड हो। १ th औं शताब्दीको उत्तरार्धमा, मोगामी नदीको सहायक नदी गिन्जान नदीको दुबै छेउमा तीन तले काठको ईन्हरू निर्माण गरियो र तातो वसन्त रिसोर्टको रूपमा विकसित भयो। र अहिले पनि, लगभग १०० वर्ष पहिलेको रेट्रो वातावरण बाँकी छ। यदि तपाईं हिउँ पर्ने बाटोको साथ टहलनुभयो भने, तपाईं साम्प्रदायिक स्नान र फुटबाथको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
यो यमगाता एयरपोर्टबाट एक घण्टाको बस सवारीमा अवस्थित छ। सेन्दैबाट, ओबानाजावा मार्फत यो बसबाट करिब hours घण्टा हुन्छ। मैले गिन्जान ओन्सेनलाई निम्न लेखहरूमा पनि परिचय गराएको छु।
यामागाता प्रान्तमा मोगमी नदी = शटरस्टक
यदि तपाईं जापानको तोहोकु क्षेत्रमा कतै यात्रा गर्नुहुन्छ भने म मोगामी नदीमा क्रूज लिन सिफारिस गर्दछु। प्रख्यात कवि बाशो म्यात्सु (१ 1644––-१– 1694 XNUMX)) ले निम्न हाइकू छोडे (जापानी सत्रह-अक्षांश कविता): समुद्री जलग्रहण गर्मीको वर्षा, कति चाँडो बग्ने मोगमी नदी बग्छ। (डोनाल्ड केनद्वारा अनुवादित) तपाईलाई किन लाग्दैन ...